M/weyne Laftagareen oo ka duulay Baydhabo kuna sii jeeda magaalada Baraawe… – Hagaag.com
M/weyne Laftagareen oo ka duulay Baydhabo kuna sii jeeda magaalada Baraawe…
Madaxweynaha cusub ee maamulka Koonfur Galbeed C/Casiis Xasan Maxamed (Lafta Gareen) iyo wafdi uu hogaaminayo, ayaa Saaka ka duulay garoonka diyaaradaha magaalada Baydhabo, wuxuuna ku sii jeedaa magaalada Baraawe.
Lafta Gareen, waxaa Garoonka Shaati Guduud ku sii sagootiyay xubno kamid ah Masuuliyiinta Koonfur Galbeed, iyadoo socdaalkiisa Sh.Hoose ay ku whelinayaan Saraakiil Ciidan iyo Wasiiro.
Ujeedka socdaalka Madaxweynaha, ayaa lagu sheegay iney tahay sidii uu u soo qiimeyn lahaa xaalada Baraawe oo ah caasimada rasmiga ah ee Koonfur Galbeed, waxaana si KMG ah loogu sii shaqeynayaa magaalada Baydhabo.
Waxey noqoneysaa Safarkii 2-aad uu Baydhabo uga soo baxo Lafta Gareen, kaidb doorashadiisii 19-kii December, Safarkan kii ka horeeyay waxa uu ku tagay Xarunta gobolka Bakool ee Xudur, isagoo la soo kulmay xubnaha Gobolka, kuwa degmada, Saraakiisha Ciidanka iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada.
Si kastaba, 16-ka bishan oo maalin Arbaca ah, ayaa lagu wadaa iney dhacdo Caleema saarka Madaxweynaha cusub ee Koonfur Galbeed, waxaana la doortay maalin Arbaca ah, halka uu xilka la wareegay maalin kaloo Arbaca ah, waxeyna Caleema saarkiisa ku aadan tahay isla Arbaco kale.